छपनिको गजुर र छानाहरु – Gulmiews
छपनिको गजुर र छानाहरु
९ असार २०७२, बुधबार २०:३४ Sanju Kauchha
(सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पाल्पा)
गुल्मी जिल्लाका तीन हिस्सामध्ये एक, प्रमुख तथा सबैभन्दा ठूलो छपनिको हिस्सा हो । छपनिमा क्षेत्र नं. ३ का सबै र क्षेत्र नं. २ का बडागाउँ र मुसिकोट गरी ३० गाविसहरू आवद्ध छन् । छपनिका मूख्य तीन नदीहरू छल्दी, पनाहा र निस्तीका पहिला अक्षरबाट नामकरणको संयोजन भएको हो । यिनै नदीहरूको उद्गमदेखि गन्तव्यसम्मका प्रवाह क्षेत्रहरूलाई समेटे तापनि झिमरुक र गर्तङ्ग खोला पनि प्रवाहित छन् ।
छपनिलाई हराभरा तुल्याउने मूख्य जिम्मेवारी यिनै नदीहरूलाई छ । छपनिको पानी पिउनेहरू विद्या, वल र धनमा अग्र पङ्तिमा पुगेका छन् । छपनिका वासिन्दाहरूलाई स्वच्छ पिउने पानीका मुहानहरूमा यसै क्षेत्रमा छन् । हाल सालझण्डी–ढोरपाटन मोटरबाटो यसै क्षेत्र भएर गएको छ । आज फरक खालको छनक (पहिचान) स्थापित गर्नुछ । पहिचानले पहँुचको अवसर ल्याई निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता कायम गर्दछ । प्रतिनिधित्वले प्रगति पथमा लैजान्छ । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न क्षेत्रबाट छाँनिएका र छाँटिएका मूख्य मूख्य छँटाहरूलाई देहाय अनुसार नियालिएको छ । छपनिको गजुर मदाने मालिका यो गजुर गुल्मीकै सबभन्दा उच्च स्थान २६९० मीटरमा रहेको छ । दही मथ्ने मदानीको चार पोराजस्तै चारैतिर फैलिएकोले यसको नाम मदाने राखिएको हो ।
एउटा पोरा पूर्वतिर छल्दीपनाहा– बडिगाडसम्म, अर्को पोरा पश्चिममा प्यूठान–रोल्पासम्म, अर्को पोरा उत्तरतिर ढोरपाटन–बाग्लुङ्गसम्म र अर्को पोरा दक्षिण चुरे पहाडसम्म फैलिएको छ । यस गजुरको दक्षिणपट्टीबाट पनाहा खोलाको, पूर्वपट्टीबाट छल्दी खोलाको र उत्तरपट्टिबाट निस्ती खोलाको शुरुवात भएको छ । शुरुमा छल्दी र पनाहा छल्दीपनाहा भन्ने स्थानमा मिसिन्छन् र यी दुबै खोलाहरू रातडाँडामा पुगेर निस्ती खोलामा समाहित हुँदै बडागाउँको फेदी दोभान भन्ने स्थानमा बडिगाडमा मिसिन्छन् ।
यस अन्तर्गत अग्ला अग्ला लेकहरू मदाने मालिका थान, मरभुङ् मालिका, पुर्कोटको कङ्केदेउराली, टोप्रे, रोल्म÷तिखेचुली, बुढीकोट, सोइरे, ईस्मा छापहिले, दर्लिङ्ग, ह्वाङ्दी गगरे, धोक्रे, घोप्टे, मुलपानी, तिखे चुली, कौडे, पौंदी आदि लेकहरू छानाको रुपमा उल्लेखनीय रहेका छन् । यी स्थानहरूबाट उत्तरतर्फ अन्नपूर्ण, धौलागिरी, माछापुछे«, निलगिरी लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरूको मनमोहक दृष्यावलोकन गर्न, सुर्योदय हेर्न, दक्षिणतिरका समथर भूभागहरू र पूर्वमा रेसुङ्गा र अर्जुन गिरी तथा पश्चिममा स्वर्गद्वारी, रुकुम, रोल्पासम्मका भूभागहरू मदाने संरक्षित वन कार्यक्रम प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा विकास गर्न २०६७ मा स्थापना भएको हो । यसको कार्य क्षेत्र घमिर, छापहिले, दर्लिङ्ग, अर्खावाङ्ग, ह्वाङ्गदी, बाँझकटेरी, अग्लुङ्ग, मलागिरी, म्यालपोखरी, मर्भुङ्ग र सिर्सेनी गरी ११ वटा गा.वि.स.हरूको १३,७६१ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यहाँ प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक महत्वका मठ मन्दिरहरू तथा मगर, ब्राम्हण, क्षेत्री र दलितहरूको बसोबास रहेको छ ।
९७५ देखि २६९० मिटर सम्मको उचाईमा फैलिएको छ । यस वनमा सामुदायिक ५० र कबूलियती ७ वटा वन आवद्ध छन् । यहाँका वनमा चाँप, चिलाउने, कटुस, वाँझ, उत्तिस, खोटे सल्ला, देवदार, खस्रु, लालीगुराँस, सिरिस, ओखरजस्ता वनस्पतिका अतिरिक्त बहुमूल्य जडिबुटीहरू तथा गैह्काष्ठ वन पैदावारहरू, २४ प्रकारका वन्यजन्तुहरू र करिब ४० हे. घाँसे मैदान छ । लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका चिराइतो, गुच्चीच्याउ, लोक्ता, अल्लो, चिराइतो, सुनगाभा, सुगन्ध कोकिलाजस्ता वनस्पतिहरू पनि यहाँ पाइन्छन् । ढोरपाटन शिकार आरक्षसम्म जैविक मार्ग भएमा रेडपाण्डा, कस्तुरी मृग, घोरल, भालु, थारको संरक्षण हुन सक्दछ ।
छापो वा ठूलो आकारको ढुङ्गालाई छपनि भनिन्छ । उहिले यस्ता ढुङ्गाहरू चौपारी चिन्नमा प्रयोग हुन्थे । पीपलधारा नादीका सिलौटा, होलोरा, जाताहरू प्रख्यात रहेका छन् । यसमा लागेका र लाग्नेलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । त्यसै गरिकन घर, गोठ, छाउन प्रयोग हुने स्लेट (ढुङ्गा)हरू प्रसस्त पाइन्छन् । यसलाई टिनको प्रयोगले विस्थापित गर्दैछ । पहिले अधिकांश गाविसहरूमा ढुङ्गाकै छाना भएका घर गोठहरू देखिन्थे । स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै उपयूक्त छ । टिनले झै गर्मीमा पोल्ने र जाडोमा शित झर्ने यसमा हँुदैन । कुच्चिने, नासिने र खिया लाग्ने हुदैन र पुस्तौ पुस्तासम्म पनि चल्दछ ।